Muxuu Facebook u dalbanayaa in aad la wadaagto sawirkaaga oo qaawan? - BBC News Somali
Sawirradan qaawanida ah ee dadka Britain la waydiisanayo waxay shirkaddu uga golleedahay in ay uga hortagto dadka aargoosi ahaanta u soo bandhiga sawirrada qaawanida ah.
Antigone Davis ayaa qirtay "in aysan 100% shaqaynin tiknoolajidda lagu garto sawirrada is leh".
Sannadkii 2015 shan boqol oo ruux ayaa dawladda UK uga cawday sawirrada sida xun loo adeegsado, sannadkii 2017kii in kabadan kun ruux ayaa soo dacwooday.
Erdogan ayaa rumaysan inay khalad ahayd in Hagia Sophia laga dhigo madxaf.
Botswana: Su'aalo ka dhashay meydadka boqolaal maroodi ah oo la helay
Meyadadka Ilaa iyo 350 maroodi ayaa laga helay waqoyiga Botswana tan iyo bishii May.
Sannad walba email xusuusin dhalasheyda ah, ayaan ka helaa aabahay oo dhintay
Natasha waxay sheegtay in ay ku riyootay aabbaheed oo "soo booqday" ka hor xuska sanadguurada dhalashadeed oo ku beegnaa bishii Juun ee naga dhamaatay balse ay niyad jabtay markii ay taasi dhici weyday.
Shirkii madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa gobollada oo baaqday